Ahoana ny fahombiazan'ny programa tsy fivadihana mahomby amin'ny fandinihana ny fahitana sy ny toekarena amin'ny fitondran-tena. Martech Zone
Fanamarihana: Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Douglas Karr avy amin'ny resadresaka Q&A niaraka tamin'i Suzi tamin'ny alàlan'ny mailaka.
Ny programa tsy fivadihana dia manome marika miaraka amina fotoana iray hitazomana ireo mpanjifany efa lasa ary hivadika azy ireo ho mpankafy mikorontana. Raha atao famaritana, ny mpikambana mahatoky dia mahalala ny marikao, mandany vola aminao, ary manome anao angon-drakitra sarobidy mandritra izany.
Ho an'ny fikambanana, ny programa momba ny tsy fivadihana dia fomba tsara indrindra hamoahana hevitra manan-danja momba ny mpanjifa, hianarana ny antony mahatonga azy ireo hanamarika, ary amin'ny farany hanorina fifandraisana matanjaka kokoa sy be fahalalana izay manana tombony maharitra. Miaraka amin'ny tolo-kevitra matanjaka manome lanja, ny programa tsy fivadihana dia afaka manohana ny ezaky ny mpanjifa ihany koa.
Ho an'ny mpanjifa, ny fampiroboroboana sy ny tombony maimaimpoana dia tena misy dikany, saingy mihoatra lavitra noho izany. Ny mpanjifa dia toy ny mahatsiaro tena ho sarobidy ary te hanorina fifandraisana - izany no ampanaovina antsika. Ny programa momba ny tsy fivadihana dia manome ny mpanjifa fahatsapana ny maha-izy azy, fahatsapana ny fankasitrahana azy ireo, ary koa manome an'io dopamine io hitany rehefa mahita ireo tombam-bidy ireo na mihombo ny toetran'ny tsy fivadihanay. Raha fintinina, ny programa momba ny tsy fivadihana dia mahasoa amin'ny fikambanana sy ny mpanjifa.
Ny fandaharam-pahatokisana dia tsy momba ny varotra fotsiny
At Brooks Bell, mamaha olana ara-barotra sarotra izahay amin'ny alàlan'ny fanandramana sy fahitana. Ny ankamaroan'ny fikambanana dia mamaritra ny programa tsy fivadihana fahombiazana ho toy ny iray izay mahatratra ny tanjon'izy ireo raha toa ka mahazo mpikambana mpikambana mahatoky vaovao maromaro na mamindra mpikambana maromaro avy amin'ny ambaratonga iray mankany amin'ny manaraka.
Na izany aza, ny mariky ny fandaharana tena mahomby dia ny fahitan'ny fikambanana ny fandaharan'izy ireo tsy mivadika ho fantsona ho an'ny fahitana ny mpanjifa. Raha tokony hifantoka amin'ny isa dia miompana amin'ny famantarana ireo Nahoana ao ambadiky ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny marika.
Avy eo ireo fikambanana dia mampiasa izany fampahalalana izany mba hahatakarana lalindalina kokoa ny mpanjifa sy hanome lanja tsy mampino mifototra amin'ireo zavatra izay manan-danja amin'ny mpanjifany. Ireo fianarana ireo dia tsy mijanona ao anatin'ny fandaharam-pahatokisana - zaraina manerana ny fikambanana izy ireo ary manan-kery hitaona ireo faritra maro ananan'ny mpanjifa miaraka amin'ny marika.
Fandrika azo sorohana amin'ny programa tsy fivadihana
Ny programa momba ny tsy fivadihana dia matetika no jerena ho ivon-karena ao anatin'ny fikambanana iray, ka matetika izy ireo no eo anilan'ny sisiny - tsy misy teti-bola, loharano na fitaovana. Ny programa momba ny tsy fivadihana dia mety miteraka fahitana manan-danja nefa, noho ny toerana misy azy ireo ao amin'ny fikambanana, dia mety tsy ho jerena na hatao ambanin-javatra izany. Manentana ny marika izahay mba hiantohana fa ny tsy fivadihana dia miasa mivantana amin'ny lafin'ny traikefa ho an'ny mpanjifa toy ny e-varotra, fikarakaran'ny mpanjifa, marketing, sns. Manana fampahalalana lehibe zaraina izy ireo ary tsy maintsy apetraka araka ny tokony ho izy mba hahafahan'ny fikambanana mandray soa amin'ny zavatra fantany , ary ny mifamadika amin'izany.
Inona no atao hoe toe-karena?
Ny toekarena ara-pitondrantena dia ny fandalinana ny fanapahan-kevitra raisin'olombelona. Mahagaga ity fikarohana ity satria tsy voatery mandray fanapahan-kevitra antenain'ny orinasa ny mpanjifa. Betsaka ny fandalinana mamaritra ny fitsipiky ny fitondran-tena isan-karazany izay azontsika ianarana avy amin'izany mba hanampiana antsika hanomezana traikefa tsara ho an'ireo mpanjifa sy mpanjifa. Zava-dehibe indrindra io amin'ny asanay, satria mifantoka amin'ny famoahana ny hevitry ny mpanjifa izay manangana fifandraisana matanjaka eo amin'ny mpanjifantsika sy ny mpanjifany izahay.
Ho an'ny fahatakarana lalindalina momba ny Toekarena momba ny fitondran-tena, dia vakiana aroso izany Voalaza fa tsy mahay mandanjalanja: ireo hery miafina mamolavola ny fanapaha-kevitsika nataon'i Dan Ariely.
Raha ny fandaharana momba ny tsy fivadihana no resahina, dia misy fitsipika mifehy ny fitondran-tena lalim-paka ao - ny tsy fankasitrahana, ny porofo ara-tsosialy, ny gamification, ny effets visualisation tanjona, ny effets de fivoarana nomena ary maro hafa. Ho an'ireo marika mieritreritra ny fomba hampitana ny programa tsy fivadihan'izy ireo, zava-dehibe ny fanekena fa te-hiditra ao ny olombelona, ​​hahatsapa ho anisan'ny zavatra iray ary halainay ny tsy mahita zavatra.
Tonga amin'ny voajanahary rehetra ireo marika ireo ny tsy fivadihana, noho izany ny fifampiresahana mazava tsara dia tokony hanako eo noho eo. Raha ny fanaovana ny mahafinaritra ny tsy fivadihana ka tian'ny mpikambana hiditra ao dia tokony ho fantatry ny marika fa ny fanaovana fandrosoana ho hita mora foana, ny fampisehoana zava-bita ary ny fanaovana izay mahafinaritra dia matanjaka be.
Namboarina ho an'ny tena fitondran-tena mpivarotra ve ny traikefanao nomerika? Ampidino ny whitepaper izay niarahanay niasa FullStory manoritsoritra fitsipika efatra momba ny toekarena momba ny fitondran-tena izay azonao ampiasaina hananganana traikefa nomerika mampihetsi-po, manintona ary manova fo avo lenta:
Ampidino ny toe-karena ara-toekarena amin'ny fitondran-tena
Disclosure: Martech Zone dia ao anatin'izany ny rohy mifandraika amin'i Amazon amin'ny Dan's Book eto.
Tags: toe-karena ara-toekarenalakolosy reniranomividy toetrafihetsiky ny mpanjifatsy fivadihan'ny mpanjifatsy fivadihanafahitana ny programa mahatokyprograma tsy fivadihanaazo lazaina ho tsy mitombina